Fidiran’ny mpianatra Maro ireo sekoly mbola manaiky ireo fitaovana teo aloha
Sekoly Katolika eto Antananarivo Efa misokatra ny fisoratana anarana
Namoaka fanambarana ny DIDEC Antananarivo ka nilazany fa efa misokatra ny taom-pampianarana 2020-2021.
Fampianarana ambaratonga ambony Tsy asian’ny fitondrana resaka akory
An-jorom-bala tanteraka mba tsy hilazana hoe tsy asian’ny fitondram-panjakana sira mihitsy ankehitriny ny fampianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara, raha ny akom-baovao voaray avy amin’ireo mpampianatra mpikaroka hatreto aloha.
Faliarivo Ampitatafika Mpiadina 16 no tsy tonga
Miisa 16 ireo mpiadina voasoratra anarana tsy tonga niatrika ny fanadinana CEPE omaly ho an’ny foibem-panadinana CEG Faliarivo Ampitatafika. Raha miisa 1.188 mantsy izy ireo dia ny 1.172 no tonga omaly.
Fanadinana CEPE omaly Zandary miisa 345 no nahetsika teto Antananarivo
Samy niezaka nanao izay ho afany tamin’ny fikarakarana sy fiarovana ireo mpianatra ao amin’ny taona fahadimy niatrika ny fanadinana CEPE omaly avokoa ny mpitandro ny filaminana.
Miantoka ny ho avin’ny firenena Mila politika matotra ny fanabeazana
Na ireo firenena matanjaka na koa mikatsaka fandrosoana dia tsy manao ambanin-javatra ny kalitaon’ny fampianarana satria izany no fototry ny fototry ny fampandrosoana.
Fanadinam-panjakana Vonona ny Minisiteran` ny fanabeazam-pirenena
“Ao anatin` ny hahamehana ara-pahasalamana isika indrindra ho an`ny ankizy. Nampiatoana ny fianarana kanefa tsy maintsy manala fanadinam-panjakana izay zony.
Ao anatin’ny fanomanana tanteraka ny fidiran’ny mpianatra ny Ray aman-dReny amin’izao na dia vao manomboka mivoaka tsikelikely ao anatin’ny fihibohana aza isika.
Tsy vitsy araka izany ireo velon-taraina sy mikaikaika, ka tonga mitaraina sy midodododo eny anivon’ireny sekoly maro isan-tsokajiny ireny, indrindra fa ny sekoly tsy miankina. Misy amin’ireto farany araka izany no manaiky ilay aloha tsikelikely ka fanavaozana ny fisoratana anarana no tsy maintsy hatao aloha raha mbola afaka miandry ny saram-pianarana volana Oktobra. Misy amin’ireo sekoly tsy miankina ihany koa no nandefitra amin’ny fampiasana ireo karazana fitaovam-pianarana vaovao. Betsaka ireo manaiky ny hamerenana hampiasana ireo fitaovam-pianarana teo aloha toy ny crayon de couleur, ny feutre….. raha tsy maintsy vaovao kosa ny kahie. Misy fiantraikany goavana any amin’ireo mpivarotra fitaovam-pianarana eto amintsika izany raha araka ny fanadihadiana natao. Lasa tsy misy mpividy firy mantsy ny entan’izy ireo nefa tsy niakatra ny vidin’ny fitaovam-pianarana. Ho an’ny kahie 100 pejy ohatra dia mbola mahazo 1.000 Ar raha 1500 Ar no lafo indrindra miankina amin’ny kalitaony.